ढकालको घरमा नेकपाले किन गर्यो शक्तिशाली वि’स्फोट ? हेर्नुहोस कारण विज्ञप्तिसहित — Sanchar Kendra
ढकालको घरमा नेकपाले किन गर्यो शक्तिशाली वि’स्फोट ? हेर्नुहोस कारण विज्ञप्तिसहित
काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुनमा बुधबार साँझ भएको ब’म वि’स्फोटको जिम्मा विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको छ । बुधबार नै एक पर्चा सार्वजनिक गर्दै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका शोभाकान्त ढकालको नागार्जुन-१ नर्सरी चोकस्थित घरमा भएको ब’म विस्फोटको जिम्मा नेकपाले लिएको हो ।